1.Back elu ndetu na iCloud
2.Back elu ndetu na Gmail
3.Back elu ndetu na iTunes
4.Backup ndetu na Dropbox
5.A ngwa ngwa tụnyere nke niile 4 ụzọ maka eke backups nke iPhone ndetu
Ọ bụrụ na ị bụ onye na smart ekwentị onye ọrụ, Ohere inweta bụ na ị na-adabere na ekwentị gị nke na-edebe a track nke ihe nile dị mkpa ka ị dị ka ndetu, ncheta, ozi ịntanetị wdg Kasị nke iPhone ọrụ anyị interacted na nwere pụta ìhè otú dabere ha na-na ha iPhone ndetu na otú ha ga-amasị ịmepụta ndabere maka ha ndetu ka nke ọma, dị nnọọ bụrụ na ha bụ ndị na-mkpa ya n'oge ọ bụla na-eme n'ọdịnihu.
Ya mere, ebe anyị na-ịme ka ị ndị kasị mma 4 ụzọ nke na-eke a ndabere gị iPhone ndetu na na kwa maka nnọọ free.
Part 1 Back elu ndetu na iCloud
iCloud bụ Apple si online ígwé ojii dabeere nchekwa ọrụ na ụlọ ọrụ ahụ ulo oru na afọ 2011. Ịmepụta ndabere gị na ndetu iji iCloud bụ otu n'ime ụzọ kacha mma iji chekwaa gị mkpa ndetu n'enweghị nsogbu na mfe.
Site na Ihuenyo, na-aga Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere na mgbe ahụ nwee nhọrọ nke 'iCloud ndabere'.
Gbaa mbọ hụ na Notes họrọ dị ka otu n'ime ihe na-kwadoo on iCloud ihuenyo. Site ndabara, nile dị ihe na ndepụta a ga-enyocha-akpaghị aka.
Part 2 Back elu ndetu na Gmail
Ọtụtụ n'ime anyị na-ama maara banyere Google mmekọrịta na-ahapụ gị mmekọrịta email, kọntaktị na kalenda gị iPhone. Otú ọ dị, e nwere ihe ọzọ magburu onwe ihe na ị pụrụ ime na gị Gmail akaụntụ; ị nwekwara ike mmekọrịta gị iPhone ndetu Gmail. Ka anyị hụ otú ime otú ahụ.
Gaa Gaa Ntọala> Mail, Ndi ana-akpo, kalenda> Tinye Akaụntụ wee họrọ 'Google' n'ihi na Gmail. wee họrọ 'Google' n'ihi na Gmail.
Ugbu a, Tinye aha gị na nzere gị Gmail akaụntụ. Ozugbo mere, hụ na na-esote ihuenyo, nhọrọ 'edeturu' agbanwuru.
Nkebi nke 3 Back elu ndetu na iTunes
Tupu ị malite ndabere na iji iTunes, ị ga-mgbe hụ na ị nwere ọhụrụ version nke iTunes arụnyere na kọmputa gị. Ị nwere ike na-aga Nyere> Tulee maka mmelite iji gosi na mgbe launching iTunes.
Jikọọ iPhone gị na kọmputa na iji eriri USB na mgbe ahụ ẹkedori iTunes.
Gbaa mbọ hụ na iCloud tọrọ gbanyụrụ na gị iPhone dị ka iTunes pụrụ ekeghị backups mgbe iCloud bụ on. Ya mere, na-aga Ntọala> iCloud> Nchekwa & ndabere na mgbe ahụ agbanyụ 'iCloud ndabere'.
Ozugbo n'elu 2 nzọụkwụ e dechara, na-aga gị na ngwaọrụ na iTunes ma na-eme ihe ziri ezi click na ya. Ọzọ, site dobe ala menu, họrọ nhọrọ nke 'Back Up' nakwa na ọ bụ ya, ị ọma kere a ndabere nke ihe niile gụnyere i deturu.
Nkebi nke 4 ndabere na ndetu na Dropbox
Dropbox bụ ihe ọzọ na-ewu ewu ojii nchekwa ngwọta. N'ihi na Dropbox ọrụ, ọ bụ nakwa nnọọ mfe ịzọpụta gị niile iPhone ndetu Dropbox.
Mgbe ị dezie dee, enweta na Share icon na ala.
Na mmapụta elu window, họrọ Chekwa ka Dropbox. Mgbe ahụ, ị ​​ga-nhọrọ ka nyegharịa dee, ọbụna họrọ nchekwa ebe ị ga-amasị ịzọpụta Cheta.
Part 5 A ngwa ngwa tụnyere nke niile 4 ụzọ maka eke backups nke iPhone ndetu
Ndabere na ndetu na iCloud
Kacha niile ụzọ; ọ bụla mfe ka mmekọrịta n'etiti dị iche iche ngwaọrụ
Awade elu nchekwa dị ka ndabere bụ na n'ime ime obodo sava; naanị 5GB free ohere
Back elu ndetu na Gmail
Ukwu ezi nhọrọ
Ndetu nwere ike ina-ehichapụ site na mberede na-arahụ ruo mgbe ebighị ebi
Back elu ndetu na iTunes
Ubé ọzọ cumbersome nke atọ ụzọ
Na iTunes ebe ọ bụ na backups na-echekwara nọ n'ógbè unu, ị na-eguzo a nnọọ obere ohere nke adịkwa ha
Ndabere na ndetu na Dropbox
Ụzọ dị mfe nke faịlụ mmekọrịta; nkwado faịlụ-ekere òkè; ekwe ka ohere ehichapụ faịlụ
Naanị 2GB free ohere nchekwa
> Resource> iPhone> 4 Free Ụzọ ndabere gị iPhone Notes